Gbọ njem- UN38.3
EU 'IWU AHPR NA-anọchite anya ndị isi obodo n'oge na-adịghị anya
Iwu nchekwa ngwaahịa EU EU 2019/1020 ga-amalite na July 16, 2021. Usoro a chọrọ ka ngwaahịa (ntụgharị CE ngwaahịa ndị enyere aka) nke metụtara ụkpụrụ ma ọ bụ ntuziaka na Isi nke 2 Nkeji edemede 4-5 ga-enwerịrị ikike. onye nnọchite anya dị na ...
MIC Gosiri OGOBU N'ANWU
Vietnam MIC nyere ọkwa ọkwa 01/2021 / TT-BTTT na Mee 14, 2021, wee mee mkpebi ikpeazụ banyere ihe nlere arụmọrụ achọrọ na mbụ. Nkwupụta ahụ gosipụtara n'ụzọ doro anya na batrị lithium maka akwụkwọ ndetu, mbadamba, na ekwentị mkpanaaka bụ nke bara uru ...
Dị mkpa! MCS ghọtara site CCS na CGC
Iji n'ihu izute dị iche iche asambodo mkpa nke ndị ahịa 'batrị ngwaahịa na welie nkwenye ike nke ngwaahịa, site unremitting mgbalị nke MCM, na njedebe nke April, anyị nwere ihe ịga nke ọma nwetara China Classification Society (CCS) laabu accredi .. .
N'oge na-adịghị anya tọhapụrụ ụkpụrụ
Site na ebe nrụọrụ weebụ ndị ahụ dịka IEC na gọọmentị China., Anyị chọpụtara na ụkpụrụ ole na ole metụtara batrị na akụrụngwa ya ka ahapụpụtara, n'etiti ha ụkpụrụ ụlọ ọrụ China dị na usoro maka nkwado, azịza ọ bụla ka na-anabata. Lee n'okpuru ndepụta: Iji mee ka ị ...
South Korea weputara akwukwo KC62368-1 ma choo okwu
Eprel 19, 2021, Korea Agency for Technology and Standards wepụtara akwụkwọ KC62368-1 wee chọọ echiche site na Nkwupụta 2021-133. Ihe ndi ozo bu ihe ndia: 1. Standard① dabere na IEC 62368-1, Audio / video, ihe omuma na nkwukọrịta - Nkebi nke 1: Nchedo choro ...
Vietnam-A ga-agbatị akporo nke lithium batrị
Na 2019, Ministụ Sayensị na Nkà na ofzụ nke Vietnam wepụtara ọhụrụ nke ngwaahịa batrị lithium dị mkpa, mana ewepụtabeghị ya n'ihu ọha. MCM enwetawo ozi kachasị ọhụrụ banyere akwụkwọ a. Emegharịrị ederede izizi ahụ ma bụrụkwa nke a ga - eme ...
Nchekwa nchekwa nchekwa batrị chọrọ - Atụmatụ Iwu
Na March 25, 2021, ministri nke ụlọ ọrụ na teknụzụ ozi kwuru na nhazi nke ọrụ ọkọlọtọ, nkwado nke ụgbọ elu ụgbọ elu na usoro iwu obodo 11 ndị ọzọ chọrọ ka ekwupụta na njedebe bụ Eprel 25, 2021, nke gụnyere nkwụnye ahụ. ..
Vietnam Batrị ọkọlọtọ ndegharị Draft
N'oge na-adịbeghị anya, Vietnam wepụtara akwụkwọ nyocha nke batrị Batrị, site na nke, na mgbakwunye na nchekwa nchekwa nke ekwentị mkpanaaka, tebụl tebụl na laptọọpụ (ule obodo Vietnam ma ọ bụ ụlọ nyocha MIC amaara), agbakwunye ihe achọrọ nyocha arụmọrụ (nabata akụkọ enyere Site na org ...
Vietnam MIC wepụtara ụdị batrị lithium ọhụrụ
Na July 9, 2020, Ministri nke Ozi na Nkwukọrịta (MIC) wepụtara akwụkwọ gọọmentị nke 15/2020 / TT-BTTTT, bụ nke gosipụtara iwu ọhụrụ maka teknụzụ ọhụụ maka batrị lithium na ngwaọrụ ejiri (ekwentị mkpanaaka, mbadamba na laptọọpụ): QCVN 101: 2020 / BTTTT, nke ga - ewe ...
Malaysia Batrị Ule & Asambodo choro Na-abia, You Jikere?
Minista nke Azụmaahịa Azụmaahịa na Ahịa nke Malaysia kwupụtara na nnwale achọrọ na asambodo chọrọ maka batrị Secondary ga-adị ire site na Jenụwarị 1st, 2019. Ka ọ dị ugbu a SIRIM QAS ka enyere ikike ka ọ bụrụ naanị ngalaba asambodo iji mejuputa asambodo ahụ. D ...
Gbanwee na usoro BIS CRS - Ndebanye aha SMART (CRS)
BIS bidoro Smart Registration na Eprel 3rd, 2019. Mazi AP Sawhney (odeakwụkwọ MeitY), Oriakụ Surina Rajan (DG BIS), Maazị CB Singh (ADG BIS), Maazị Varghese Joy (DDG BIS) na Nwada Nishat S Haque (HOD-CRS) bụ ndị ugwu nọ n’elu ebe ahụ. Ndi MeitY ndi ozo, BIS, CDAC ...
-Gbọ njem- UN38.3 Mmepe akụkọ ihe mere eme nke nyocha njem ụgbọ elu na China Na 2003, e depụtara ngwaahịa batrị Lithium na-arụ ọrụ nke ọma na thegbọ njem nke Ngwakọta Ngwaahịa nke Ihe Nleba na CiteriaChapter 38 Sectio .In 2006 na Flight Standards Department of General Administration of .. .